नागरिकले लापरबाही गरेको भन्दै लकडाउन कडा पार्ने तयारीमा सरकार ! « Bagmati Online
नागरिकले लापरबाही गरेको भन्दै लकडाउन कडा पार्ने तयारीमा सरकार !
सरकारले लकडाउन खुकुलो भएसँगै संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै यसलाई कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ। सोमबार कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र(सिसिएमसी)को बैठकमा अहिले भइरहेको लकडाउनको मोडालिटीलाई व्यवस्थित बनाउनेबारे छलफल भएको हो। ‘अहिले जति खुलेका छन्। त्यसलाई बन्द गर्ने भन्ने होइन। तर खुलेका ठाउँमा प्रोटोकलको पालना गरिएको छैन,’सिसिएमसी स्रोतले भन्यो,’पसलमा भौतिक दूरी कायम भएको छैन। मानिसहरू मास्क नलगाइ हिँड्न थालेका छन्। यसले जोखिम बढ्ने खतरा बढेको छ। त्यसैले यसको निगरानी गर्नुपर्छ भनेर छलफल भएको छ।’
त्यस्तै, सिसिएमसीले विदेश पढ्न जानेहरूका लागि भाषा परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई भनेको छ। ‘धेरै भीड नहुनेगरी भाषा परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई भनिएको छ,’सिसिएमसीका सचिव महेन्द्र गुरागाईंले भने,’टोफेल आइएलटिएसको परीक्षा गर्नका लागि निर्देशिका तयार पार्ने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयलाई दिइएको छ।’ विदेशबाट आउनेहरूका लागि होम क्वारेन्टिनमा बस्न चाहेमा त्यसको व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिइएको छ।
आजमात्रै ललितपुरमा थपिए २२ काेराेना संक्रमित, कहाँ कहाँका छन संक्रमित हेर्नुस् सुची !
कपाल काट्ने समाजवादी काइदा, सुरक्षाकर्मी भएपछि फाइदा !
मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न, छिटै उद्घाटन गर्दैछौं : मन्त्री मगर
घनश्यामले प्रधानमन्त्रीलाई भने- ‘तपाईंलाई सल्लाह दिने गलत छन्, म सँग प्रमाण छ’